Ingcamango yeBuddha yobuNichiren
Umthetho we-Mystic weLotus Sutra
Nangona ukungafani, ezininzi izikolo zeBuddha ziyahlonelana njengento efanelekileyo. Kukho isivumelwano esasasazeka ukuba nayiphi na isikolo apho iimfundiso zawo zihambelana neZine zeDarma Seals zingabizwa ngokuthi yiBuddhist. Nichiren UbuBuddhism, nangona kunjalo, yasungulwa kwinkolelo yokuba iimfundiso zeQumrhu likaBuddha zifumaneka kuphela kwiLotus Sutra . UbuBuddhism beNicheren buzisekela ngokuTshintsho kweThathu kwe Wheel kunye nenkolelo yayo kwiBuddha-imvelo kunye nokufumaneka kwenkululeko kulo xesha lobomi, kwaye oku kufana neMahayana.
Nangona kunjalo, i-Nicheren igcina ukukhishwa kanzima kwezinye izikolo zaseBuddhism kwaye oku kuyingqayizivele ekungabikho kokunyamezela.
UNichiren (1222-1282) wayengumbingeleli waseJapan waseTendai oye wakholwa ukuba iLotus Sutra yinto yonke imfundiso yeBuddha. Wayekholelwa kwakhona ukuba iimfundiso zikaBuddha zangena ngexesha lokuchithwa. Ngenxa yesi sizathu, wayevakalelwa kukuba abantu kufuneka bafundiswe ngendlela elula kwaye ecacileyo kunokuba babe neemfundiso eziyinkimbinkimbi kunye neendlela ezinzulu zokuziphatha. U-Nichiren wahambelana neemfundiso zeLotus Sutra kwi- daimoku , eyinto yokumemeza ibinzana elithi Nam Myoho Renge Kyo , "Ukuzinikela kuMthetho We-Mystic weLotus Sutra." U-Nichiren ufundisa ukuba i-daimoku yemihla ngemihla inceda umntu ukuba aqonde ukukhanya kulo bomi-inkolelo eyenza iNicheren aqheleke ngokufanayo nezikolo ze-tantric zaseManhayana.
Nangona kunjalo, uNichiren wayekholelwa ukuba amanye amacandelo eBuddhism eJapan - ngokukodwa, iShingon , iLizwe elungileyo kunye neZen - yonakaliswa kwaye ayengayifundanga i-dharma yangempela.
Kwisinye seengcoko zakhe zokuqala, Ukusekwa koBulungisa kunye noKhuseleko kwezwe , wathi iinqununu zeentlanzi, iindlala kunye neendlala kulezi zikolo "zobuxoki". UBuddha kufuneka ukuba uhoxise ukukhusela kwakhe eJapan, wathi. Yiyo kuphela into ayenayo, uNichiren, oyimfuneko eya kubuya uBuddha.
UNichiren wakholwa ukuba yayiyihambo yakhe ebomini ukulungiselela indlela uBuddhism yangempela yokusasazeka kwihlabathi lonke elivela eJapan. Abanye abalandeli bakhe namhlanje bamjonga ukuba nguBuddha onemfundiso yakhe ebaluleke ngaphezu kweBuddha yembali.
Izenzo Zokwenkonzo ZamaBuddhism kaNichiren
UDaimoku: Ukumemeza kwansuku zonke kweMantra Nam Myoho Renge Kyo , okanye ngamanye amaxesha uNamu Myoho Renge Kyo . Amanye amaBuddha aseNichiren aphinda ahlabele ingoma yexesha elithile, uhlale ubala ne-mala okanye i-rosary. Abanye bavuma ingqikelela yexesha. Ngokomzekelo, uBuddhist waseNichiren angasetha eceleni imizuzu elineshumi elinesibini kwantambama nobusuku be-daimoku. I-mantra ihlaziywa ngesigqi ngokugxila ekucamngeni.
I-Gohonzon: I-mandala eyenziwe nguNichiren omele uBuddha-uhlobo kunye nento into yokuhlonela. I-Gohonzon isoloko ibhaliwe kwiprogram yokulenga kwaye igcinwe kwisibingelelo. I-Dai-Gohonzon iGohonzon ethile icinga ukuba isesandleni sikaNichiren kwaye ibhalwe eTaisekiji, itempile ephezulu yeNichiren Shoshu eJapan. Nangona kunjalo, i-Dai-Gohonzon ayibonakali njengeyinyani zonke izikolo zaseNichiren.
Gongyo: Kwi-Nichiren UbuBuddha, i-gongyo ibhekisela ekumemeni kwengxenye ethile yeLotus Sutra kwisevisi esemthethweni.
Amacandelo acacileyo e-sutra ahlaywayo ahluka ngehlelo.
I-Kaidan: I- Kaidan yindawo engcwele yokulungiswa okanye isihlalo sobukhosi. Intsingiselo ecacileyo ye-kaidan e-Nichiren ubuBuddha yinto engavumelani ngayo. I-Kaidan inokuba yindawo apho ubuBuddha bokwenyaniso buza kusasazeka kwihlabathi, enokuba yiYapan. Okanye, i-kaidan inokuba yintoni na apho i-Nichiren UbuBuddhism iyenziwa ngokunyanisekileyo.
Namhlanje izikolo ezininzi zeBuddhism zisekelwe kwimfundiso kaNichiren. Ezi zizona zibalaseleyo:
I-Nichiren Shu ("iSikole seNichiren" okanye "iNichiren Faith") isikolo esiphezulu seNichiren Buddhism kwaye iqwalaselwe enye yezona zinto ziqhelekileyo. Ingabandakanyekanga ngaphaya kwamanye amacandelo, kuba ibona uBuddha wembali njengoBuddha ophakamileyo walo nyaka kwaye ubheka uNichiren ukuba abe ngumbingeleli, kungekhona uBuddha ophakamileyo.
I-Nichiren Shu Buddhist ifundela iinqununu ezine ezineNyaniso kwaye zigcina ezinye izinto eziqhelekileyo kwezinye izikolo zesiBuddha, ezifana nokukhusela .
Ithempeli eliyinhloko likaNichren, iNtaba yeMinobu, ngoku ipropile enkulu yeNichiren Shu.
UNichiren Shoshu ("iSikole Esinyaniso saseNichiren") yasungulwa ngumfundi kaNichiren ogama linguNikko. U-Nichiren Shoshu uzijonga njengesikolo kuphela se-Nichiren Buddhism. Abalandeli bakaNichiren Shoshu bakholelwa ukuba uNichiren wathatha indawo yeBuddha yembali njengowona uBuddha oyinyaniso wexesha lethu. I-Dai-Gohonzon ihlonishwa kakhulu kwaye igcinwe kwithempelini ephezulu, iTaifitiji.
Kukho izinto ezintathu zokulandela uNichiren Shoshu. Iyokuqala kukuthembela ngokupheleleyo kwiGohonzon nakwiimfundiso zikaNichiren. Okwesibini yinto eqinileyo yokugongyo kunye ne-daimoku. Okwesithathu kufundiswa imibhalo kaNichiren.
Ngama-1920 intsha entsha ebizwa ngokuba yiReiyu-kai yavela eNichiren Shu eyayifundisa inhlanganisela ye-Nichiren Buddhism kunye nonqulo lwabakhokho. URissho-Kosei-kai ("Umbutho Wokuseka Ubulungisa noBudlelane Bomngane") ngumbutho owehlukileyo owahlukana noReiyu-kai ngo-1938. Into eyingqayizivele yeRissho-Kosei-kai yi- hoza , okanye "isangqa sovelwano ," apho amalungu ahlala kwisangqa ukuba abelane kwaye axoxe ngeengxaki kunye nendlela yokusebenzisa iimfundiso zikaBuddha ukuzisombulula.
I-Soka-gakkai, "I-Value Creation Society," yasungulwa ngowe-1930 njengombutho wezemfundo ophantsi weNichiren Shoshu. Emva kweMfazwe Yehlabathi II, umbutho wanda ngokukhawuleza.
Namhlanje i- Soka Gakkai International (SGI) ibita amalungu angama-12 yezigidi kumazwe angama-120.
I-SGI ibeneengxaki zayo. Umongameli wangoku, uDaisaku Ikeda, uphikisa inkokheli kaNichiren Shoshu phezu kobunkokeli kunye nemibandela yemfundiso, okwenza ukuba i-Ikeda ixoshwe ngo-1991 kunye nokuhlukana kwe-SGI kunye no-Nichiren Shoshu. Nangona kunjalo, i-SGI ihlala iyintlangano enamandla ezinikele kwiNichiren Buddhist practice, ukuxhotyiswa kwabantu kunye nokuthula emhlabeni.
I-Deeper Meaning ye-Diamond Sutra
Indlela Eyizwa Ngayo Ukuba Ngombala, nguZora Neale Hurston
Biography kaRené Magritte
I-Astrolabe: Ukusebenzisa iiNkwenkwezi zokuHlola nokuLondoloza ixesha
Indlela yokwenza ii-Acrys zakho zamanzi
Ubukhosi basePersi - uKoreshi Omkhulu oKwandisiweyo
Izikolo zabafundi abaneendlela ezahlukeneyo zokuFunda
Iimveliso kunye neNgcono yokufumana iSigqibo seMatitshala Ngaphambi kwe-PhD
Konke Nge-Teapot Dome Scandal
Barnburners kunye neHunkers
Imfazwe ye-1812: Imfazwe yeFama ka-Crysler